कुकुरले सुँघेरै पत्ता लगाउँछ कोरोना संक्रमण! :: Setopati
द न्यूयोर्क टाइम्स असोज ८
तपाईंहरूलाई स्वाब नझिकी कसरी कोरोना परीक्षण गर्ने भन्ने लाग्दो हो!
हेल्सिन्की एयरपोर्टले प्रशिक्षणप्राप्त कुकुर प्रयोग गरेर कोरोना परीक्षण सुरू गरेको हो। बुधबारदेखि एयरपोर्टमा दुईवटा कुकुर खटाइएका छन्। ती कुकुरले यात्रुको पसिनाको गन्ध सुँघ्छन् र त्यसै आधारमा संक्रमण छ कि छैन पत्ता लगाउँछन्।
अहिलेलाई यो प्रयोग मात्र हो। यसले प्रभावकारी काम गर्छ कि गर्दैन भनेर प्रमाणित हुन बाँकी छ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा पुनःसञ्चालनसँगै एयरपोर्टहरूले यात्रुको सुरक्षाका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याउँदै छन्। कोरोना परीक्षण गर्न एयरपोर्टमै ज्वरो नाप्ने, स्वाब जाँच्ने, र्‍याल स्क्रिनिङ लगायत विधि अपनाइँदै आएको छ। कुकुरको प्रयोग त्यसैको एउटा कडी हो।
फिनल्यान्डका अध्ययनकर्ताले संक्रमण परीक्षणमा कुकुरको प्रयोग सजिलो, सस्तो र प्रभावकारी हुने दाबी गरेका छन्।
यात्रुहरू एयरपोर्ट प्रवेश गरेसँगै उनीहरूको सामान व्यवस्था गरिन्छ। त्यसपछि उनीहरूलाई मुख र घाँटी पुछ्न लगाइन्छ। यसरी पुछ्दा पसिनाको गन्ध टिस्यू पेपरमा सर्छ। यात्रुले त्यो पेपर डब्बामा राख्छ। त्यसपछि सुरू हुन्छ कुकुरको काम।
'अहिलेसम्मको परीक्षण गर्दा कुकुरहरूले आफ्नो काम राम्ररी गरिरहेका छन्,' उनले भनिन्।
'हरेक प्रजातिको कुकुरलाई कोरोना भाइरस पत्ता लगाउने प्रशिक्षण दिन सकिन्छ। तर, ती सबैले एयरपोर्टमा काम गर्न सक्छ भन्ने हुँदैन,' यो प्रशिक्षणमा प्रायोजक रहेको एभिडेन्सिया अस्पताल तथा भेटरिनरी क्लिनिकका प्रतिनिधि भिर्पी पेरालाले भनेकी छन्।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, असोज ८, २०७७, १३:१५:००